Hyatt Saipan: Inona no mitranga rehefa tapitra ny fifanarahana?
Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Hyatt Saipan: Inona no mitranga rehefa tapitra ny fifanarahana?
Jolay 31, 2018
Ny fehezan-dalàna amin'ny Hyatt Saipan dia haharitra 3 taona mahery kely manomboka izao amin'ny Desambra 2021. Inona no hitranga amin'izay?
Ny talen'ny trano fandraisam-bahiny Resort Nick Nishikawa dia nilaza fa, mazava ho azy, ny fanantenan'izy ireo fa afaka manohy manokatra ny varavarany izy ireo.
Telo volana lasa izay, Marianne Teregeyo, sekreteran'ny tanim-panjakana any Saipan, dia nihaona tamin'ny fitantanana ny Hyatt saingy tsy afaka nanome vaovao farany raha mitohy ny dinika. Imperial Pacific International (CNMI) LLC dia tafiditra ihany koa amin'ny adihevitra momba ny fampiasam-bola.
Amin'ny lafiny governemanta amin'ny fifampiresahana fampanofana, ny filohan'ny Antenimieran-doholona Saipan, Arnold I. Palacios, dia nanolotra volavolan-dalàna hanovana ny lalàna ankehitriny izay hampiakatra ny fanofana ny tanim-bahoaka ho 75 taona - 40 taona miaraka amin'ny fanitarana hatramin'ny 35 taona mahery. Tsy mbola lany ny volavolan-dalàna.
Ny volavolan-dalàna momba ny loholona (SB 20-35) dia eo amin'ny sehatry ny komity misahana ny harena, fampandrosoana ara-toekarena ary fandaharanasa aorian'ny nandany azy tamin'ny fanitsiana teo amin'ny sehatry ny trano.
Ny Departemantan'ny tanim-panjakana dia hamoaka fangatahana Proposal (RFP), ary ny Hyatt dia hanana fotoana hametrahana tolotra ary hampiditra izay fampiasam-bola vaovao nofidiny tamin'io fotoana io.
Hyatt no marika hotely iraisam-pirenena voalohany tao amin'ny Commonwealth of the Northern Mariana Islands (CNMI) ary niatrika ny tafio-drivotra nandritra ny 37 taona ny tantarany tao amin'ilay nosy. Tamin'ny fotoana nanokafana azy dia nijanona ny fizahan-tany noho ny fanafoanana ny sidina ho any amin'ny faritanin'i Etazonia, vokatry ny toekarena nikatso.
Tamin'ny taona 2009, ny Fikambanan'ny Hotely ao amin'ny Nosy Marianas Avaratra dia nijery ny tsenan'i Sina mba hamerina ny tsenan'ny fizahan-tany, ary izany dia nanomboka ny fiovana tsara. Tamin'ny taona 2012, ny Hyatt Saipan dia nanokana efitrano ho an'ireo mpandraharaha mpizahatany hivarotra amina mpizahatany sinoa, izay niafara tamin'ny fiatraikany domino tamin'ny fitsidihana maro hafa sy sidina maro kokoa.
Fanamby iray hafa atrehan'ny Hyatt any Saipan ny programa CNMI-Only Transitional Worker (CW-1) amin'ny taona 2019. Ny fanasokajiana ny visa ho an'ity programa ity dia ahafahan'ny mpampiasa ao amin'ny Commonwealth of the Northern Mariana Islands (CNMI) mangataka. fahazoan-dàlana hampiasa mpiasa vahiny (tsy mpifindra monina) izay tsy afaka miasa amin'ny sokajy mpiasa tsy mpifindra monina hafa. Amin'izao fotoana izao dia manodidina ny 300 ny isan'ireo mpiasa ao amin'ny Hyatt ka ny 80 isanjaton'izy ireo dia mponina eo an-toerana, ary ny 20 isanjato dia eo ambanin'ny programa CW-1. Araka ny voalazan'i Hyatt's GM Nishikawa, ny mpiasa CW-1 dia voatery ho ilaina hameno ny banga ao amin'ny toeram-pialofana.